Arag shuruudaha laga doonayo qofkii ka mid noqonaya Guddiga Doorashooyinka? Makula tahay in la buuxiyey? | Hadalsame Media
Home Wararka Arag shuruudaha laga doonayo qofkii ka mid noqonaya Guddiga Doorashooyinka? Makula tahay...
Arag shuruudaha laga doonayo qofkii ka mid noqonaya Guddiga Doorashooyinka? Makula tahay in la buuxiyey?
(Muqdisho) 15 Nof 2020 – Waxaa la isku qabtay qaabka loo soo xulay Guddiga Doorashooyinka heer federaal iyo heer gobolba, iyadoo ay musharrixiinta, hay’ado ay ka mid tahay midda Heritage iyo falanqeeyayaal madax bannaaniba dureen qiyamka iyo isku hallaynta guddiyada lasoo xulay.
Haddaba, aannu eegno shuruudaha laga doonayo qofka xubin ka noqonaya Guddiga Doorashooyinka, sida ku dhigan Heshiiskii Muqdisho:
1 – Waa in uu yahay Qof Muslim ah, dhimirka Ka Caafimaad qaba, Da’diisa ka yareyn 30 Sano.
2 – Waa in uu yahay qof Dhexdhexaad ah, oo Bulshada Dhexdeeda Sumcad ku leh.
3 – Waa in uu yahay Qof Hufan, oo karti leh, Gudan kara Waajibaad loo xilsaarey si daahfuran.
4 – Waa in uusan gelin wax dambi ah Xukumina Maxkamad 5-tii Sanno ee ugu dambeysey.
5 – Waa in uusan Xil Siyaasadeed ka hayn Dalka.
6 – Waa in aqoontiisa gaarsiisan tahay Heer Jaamacadeed, aqoona u leh arrimaha doorashooyin.
7 – Waa in uu Fahmi karaa arrimaha doorashooyinka dadban 2020- 2021.
8 – Waa in uusan wax Xiriir ah la lahayn kooxaha Kooxaha Xag jirka.
Marka aad shuruudaha akhrisay makula tahay in ragga loo magacaabay ay kasoo bexeen?
Waxaa Qoray: Amiin Yuusuf Khasaaro
Previous articleWeligaa siyaasi ma XAMBAARTAY?! (Akhri sheekadan oo ka mid ah kuwa dalka ka dhacay)
Next articleMadaxda Afrika Magufuli haka bartaan sida lagu soo noqdo adiga oo aan muran ku jirin (Akhri jawaabta wiil Muslim ah)